जिन्दगीलाई जिताउने किताबी कुरा | Wagle Street Journal
वेकनको वर्गीकरणको तेस्रो बुँदाको झल्को दिनेगरी शिव खेराले आफ्नो बेस्ट सेलिङ पुस्तक ‘यू क्यान विन’ को सुरुमै ‘यो किताब कसरी पढ्ने’ शीर्षकमा पाठकलाई यस्तो सल्लाह दिएका छन्- ‘सरर पल्टाउँदै पढेर या एकै बसाइमा पूरै किताब निलेर यो किताबका अवधारणा बुझ्न सकिँदैन । यसलाई बिस्तारै र होसियारीपूर्वक पढिनुपर्छ, एकपटकमा एउटा पाठ । …यसलाई कार्य पुस्तकका रूपमा प्रयोग गर्नुस् । मार्जिनमा नोट लेख्नुस् । पढ्दै जाँदा हाइलाइटर प्रयोग गर्दै महत्त्वपूर्ण र विशेषगरी आफूलाई उपयोगी हुने शब्दहरू वा वाक्यहरू वा अनुच्छेदहरू चिन्ह लगाउनुस् । पढ्दै जाँदा प्रत्येक पाठकको अवधारणा आफ्नो पति/पत्नी वा पार्टनर वा नजिकको साथीसँग छलफल गर्नुस् ।’
किन्नेले कसरी पढ्छन् तर खेराको त्यो पुस्तक १९९८ मा पहिलोपटक प्रकाशित भएयता खेराका अनुसार १५ लाख प्रति विकेको छ र बिकिरहेको छ । ‘विजेताहरूले फरक कुरा गर्दैनन्, उनीहरूले कुरा फरक ढंगमा गर्छन्,’ भनाइ पुस्तकको मुख्य थिम हो र खेराको ट्रेडमार्क पनि । त्यही विषयमा खेरा तीनदिने कार्यशाला पनि गर्छन् र त्यसका लागि कर्पोरेट विश्वले टन्न पैसा तिरेर आफ्ना कर्मचारी/प्रबन्धकलाई सहभागी गराउँछन् । त्यस्तै एउटा कार्यशाला शिवले काठमाडौंमा पनि गरेर जो शुक्रबार (हिजो) सकियो । कार्यशालामा तीन दिनका लागि ३५ हजार तिरेर १ सय ७६ जना सहभागी भए । खेराले शनिबार दशरथ रंगशालामा एउटा प्रवचन दिँदै छन् जसका लागि ६ सय र २ सय ५० का दस हजारभन्दा बढी टिकट बिकेको एकजना आयोजकले बताए । उनी शनिबारै काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी पुस्तक मेलामा एजुकेसनल बुक हाउसको स्टलमा आफ्ना किताबमा हस्ताक्षर गर्न उपस्थित हुनेछन् । एजुकेसनलका प्रबन्धक अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा खेराका थुप्रै पाठक छन् ।
नेपालीलाई के थाहा छैन जो अमेरिकादेखि एकजना भारतीय आएर फाइभ स्टार होटलमा लेक्चर दिनुपर्छ ? सफलताका पनि गणितको जस्तो सूत्र हुन्छन् र ? ‘सबै जीवनमा सफल हुन चाहन्छन्,’ सोल्टी होटलमा आयोजित कार्यशालाको दोस्रो दिन लगातार १२ घन्टाको प्रस्तुतीकरणपछि मसँग अन्तर्वार्ता गरेका खेराले भने- ‘सबैलाई सहयोग चाहिन्छ । त्यो सानो प्रेरणा र उत्प्रेरणा चाहिन्छ ।’ खेराले आफूले प्रेरणा दिन नसक्ने तर उत्प्रेरणा दिने बताए ।
पाठकलाई सम्बन्धित विषयबारे साधारण भाषामा सजिलोसँग बुझाउने ‘सेल्फ हेल्प’ र ‘हाउ टु’ पुस्तकहरू नेपालमा उतिसारो चल्तीमा छैनन् तर विकसित देशका किताब बजारमा तिनको प्रभावशाली उपस्थिति पाइन्छ । प्रायः ननफिक्सन किताबको कुनै पनि टप टेन बिक्री सूचीमा त्यस्ता किताब एउटा न एउटा परेकै हुन्छन् । त्यस्ता पुस्तकले कम्प्युटरको सञ्चालन प्रणाली विन्डोज कसरी चलाउने, पिज्जा कसरी पकाउने भन्नेदेखि शिव खेराको सर्न्दर्भमा जीवनमा कसरी सफल बन्ने, विजयी हुने भन्नेसम्मका विषय सम्बोधन गर्छन् । पछिल्लो श्रेणीका किताब एउटा निश्चित वर्गलाई लक्षित गर्दै, पाठकलाई सम्बोधन गर्दै योजनाबद्ध र व्यवस्थित ढंगमा लेखिएका हुन्छन् र तिनले जीवनमा सकारात्मक प्रवृत्ति र सोचको वकालत गर्छन् । त्यस्ता किताबका लेखकले लेख्नुबाहेक, खेराकै उदाहरण लिउँ, प्रवचन र प्रस्तुतीकरण पनि गरिरहने भएकाले उनीहरू गुरु पनि कहलाइन्छन् । ‘सेल्फ हेल्प’ या ‘हाउ टु’ वर्गमा ठ्याक्कै फिट खाने नदेखिए पनि धेरैले उद्यमी कर्ण शाक्यको बेस्ट सेलर किताब ‘सोच’ लाई सकारात्मक जीवनका लागि प्रेरित गर्ने कृती ठानेका छन् । शाक्य आफू ‘सेल्फ हेल्प’ किताब लेखक या ‘गुरु’ नभएकोमा जोड दिँदै आफ्नो जिन्दगीको अनुभवलाई पुस्तकमार्फ अरूसँग साझेदारी गर्दा अनपेक्षितरूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेको बताउँछन् ।
‘म शिव खेरा, दीपक चोप्रा होइन,’ शाक्यले अर्का एक विख्यात भारतीय पृष्ठभूमिका चिकित्सक, लेखक तथा सेल्फ हेल्प गुरुको नाम लिँदै भने- ‘मैले जिन्दगीमा कसरी सफल हुने भनेर लेखेको होइन । ‘सोच’ मेरो अनुभव र जिन्दगीका उतारचढावको वृत्तान्त हो ।’ समस्या र चुनौतीविहीन जिन्दगीको कुनै अर्थ नहुने ठान्ने शाक्य चुनौती भएमात्र जिन्दगीमा सफलता मिल्ने विश्वास गर्छन् । ‘सपना देखें, साकार गर्न काम गरें, काम गर्दा चुनौती आयो र त्यसको सामना गरें,’ उनले भने । आफ्नो किताबलाई ‘सपना देख्न रुचाउने, जो बोल्छ त्यो गर्न रुचाउने र आफ्नो काम खुबै रुचाउने व्यक्तिको’ कथा भएको शाक्यले उल्लेख गरे ।
पक्कै, पत्नी र छोरीलाई असमयमै गुमाएका शाक्य व्यावसायिक दृष्टिले सफल मानिन्छन् । (किताबको कुरै नगरौं, सोचको अपार सफलतापछि शाक्यले अर्को किताब ‘खोज’ लेखिसकेका छन् जो छाप्ने जोखाना हेर्दै छन् उनी । ‘तर म लेखक या साहित्यकार होइन,’ उनी भन्छन्- ‘व्यवसायी हुँ ।)
सन्देशका दृष्टिले उस्तै प्रकृतिका किताब लेखेकाले होला मसँगका फरकफरक अन्तर्वार्तामा व्यक्त भएका शाक्य र खेराका कतिपय कुरा ठ्याक्कै मिले । ‘म जे बोल्छु त्यही गर्छु,” उनले भने- ‘जे गर्छु यसलाई पूरै विश्वास गर्छ । यो मेरो व्यवसाय (प्रोफेसन) होइन लगाव (प्यासन) हो । यदि कसैले आफूले विश्वास नगर्ने काम गर्छ भने उसले अभिनय गरेको हुन्छ र ऊ हलिउडमा जानुपर्छ ।’
पक्कै, जुन काममा आफैंलाई विश्वास छैन त्यो गरेर के फाइदा ? त्यसैले ठूला कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई उनीहरूले गर्ने कामप्रति विश्वास जगाउन अनेकौं प्रयास गर्छन् ता कि कर्मचारीले काममा ध्यान दिउन् र कम्पनीको उत्पादनशीलता बढोस् । जब काम र कर्मचारीको लगावमा मेल खान्छ, भनिरहनै पर्दैन, उत्पादनशीलताले उचाइ लिन्छ । ‘पत्रकारिता खासमा मेरो सोख हो,’ कुनै एउटा वेबसाइटमा एकजना अमेरिकी पत्रकारले लेखेको मैले पढेको थिएँ- ‘खुसीको कुरा आफ्नो सोख पूरा गर्दा प्रबन्धकहरूले मलाई तलब दिन्छन् !’ त्यो पढेको क्षण मैले ती पत्रकारमा आफू पाएको थिएँ र अहिले पनि त्यो अनुभव कायमै छ ।
के जित्नु नै सबै कुरा हो ? सबै जित उस्तै हुन् ? दुवैको उत्तर, खेराका अनुसार, ‘पक्कै होइन ।’ ‘कतिपय मान्छे ‘जित्नु सबै कुरा होइन, मात्र एउटा कुरा हो’ भन्ठान्छन्,’ खेराले भने- ‘त्यस्ता मान्छे जसरी भए पनि र अनेकौं हत्कण्डा अपनाएर जित्नै मात्र चाहन्छन् । त्यो इमानदारी होइन । विजेता हुनु भनेको एउटा भावनात्मक कुरा हो । कोही पदक पाएर पनि हरुवा र कोही पदक नपाएरै पनि विजेता कहलाउन सक्छ ।’ त्यसपछि उनले केही दशकअगाडिको एउटा ओलम्पिक प्रतिस्पर्धाको उदाहरण दिए जसमा एकजना धावकले जित्नै लाग्दा पनि अघि बढ्न अघि बढ्न छाडेर समस्यामा परेको प्रतिस्पर्धीको उद्धारमा आफूलाई लगाएका थिए । ‘त्यो हो वास्तविक जित,’ उनले भने- ‘पदकमा उनी हारे तर भावनामा उनले जिते । खासमा ओलम्पिक भावना पनि त्यही हो ।’
खेराजस्ता ‘सेल्फ हेल्प’ लेखक र प्रवचकले खासमा नयाँ कुराचाहिँ गर्ने होइनन् । भएकै कुरालाई ओल्टाइसल्र्टाई भनिदिने मात्रै हुन् । खेराका पछिल्ला दुइ किताब पढेको छैन तर उनको ‘यु क्यान विन’ मैले हालै सरर पल्टाएँ । (माथि नै उल्लेख छ, सरर पल्टाउनु पर्याप्त छैन ।) थाहा नभएको या अनुच्छेद पढी सिध्याउनुअगावै अनुमान गर्न नसकिने खासै धेरै कुरा मैले फेला पार्न सकिनँ । त्यसैले ‘यु क्यान विन’ पढ्नैपर्छ भनेर सिफारिस गर्दिनँ तर त्यो किताबमा आधारित भएर खेराको कम्पनीले कसरी मार्केटिङ गरेको छ, त्यसको एक झल्को उल्लेख गरिहालूँ । सोल्टीको हलभित्र कार्यशाला चलिरहँदा बाहिर ‘यु क्यान विन’ लेखिएका कलम, मग, झोलाजस्ता सामान बिक्रीमा थिए । एउटा कलमको नौ सय । ‘मारामार बिकेको छ,’ बिक्रेताले भने । खुबै बिक्नेमा साना तासका पत्ताको बुक पनि थियो र पत्तामा किताबमा मुख्य कुरा संक्षेपीकृतरूपमा लेखिएका थिए ।
त्योचाहिँ मलाई गज्जब लाग्यो । किताबलाई किताबकै रूपमा बेच्नेभन्दा पनि त्योबाहेकको बजारीकरण अब नेपाली पुस्तक संसारमा पनि आवश्यक छ । पब्लिकेसन्स नेपालयले ‘पल्पसा क्याफे’ को टिर्सट निकाले पनि त्यो प्रयासले थप व्यापकता पाएन । लेखकहरूले कागजी किताबमात्रै बेचेर बजारीकरणका बहुआयामबाट फाइदा लिन सक्दैनन् । त्यसका लागि किताबी कुरालाई तासका पत्तीहरूमा समेत बेच्न पछि पर्नु हुँदैन- पाठकले चाखुन्मात्रै वा निलुन् वा पचाउन् । त्यो मेरो सानो पुँजीवादी सोच !
← समर स्यान्डल फ्लिप-फ्लप Narahari Acharya’s Thanks Giving Meeting →